विदेशी दानले को समृद्ध भएको छ ? - VON TV
विदेशी दानले को समृद्ध भएको छ ? भनेर 'मोटिभेश्नल स्पिकर' बन्नुअघि निम्न कुराहरूमा स्यानो नजर पुऱ्याउनुहोला है !
१२ माघ २०७६, आईतवार ११:०७ 210 ??? ???????
विदेशी दानले को समृद्ध भएको छ ? भनेर ‘मोटिभेश्नल स्पिकर’ बन्नुअघि निम्न कुराहरूमा स्यानो नजर पुऱ्याउनुहोला है !
भनेर ‘मोटिभेश्नल स्पिकर’ बन्नुअघि निम्न कुराहरूमा स्यानो नजर लगाऔं।